Khabiirka Cimilada ah ayaa ka muuqda hababka warbaahinta bulshada si aad u sarayso SEO
Internetka ayaa si tartiib ah u beddelaya dhammaan hababkii suuq-geynta ee dhaqameed ee dadku maanta ku dhaqmaan. Tusaale ahaan, webmasterku waxay samayn karaan xirfadahooda suuq-geynta iyaga oo adeegsanaya qaar ka mid ah qalabka wax lagu qoro SEO sida Google Analytics. Xaaladaha kale, dadka qaarkood waxay doorbidaan inay ku tiirsanaadaan suuqgeynta suuq-geynta si ay u helaan macaamiishooda - какой полистирол для бинбега. Hababkaasi waxay isku dayayaan in ay kordhiyaan joogitaanka boggaaga, calaamad ama qaybaha kale ee barnaamijyada webka oo dhan sida horumarka internetka. Waxaa sidoo kale jira kiisas kale oo ay dadku ku fashilmaan in ay fuliyaan hababka suuq-geynta warbaahinta Bulshada (SMM) si habboon marka ay dejinayaan boggooda internetka e-commerce.
Qaar ka mid ah hababka SEO-ka ee websaydhiyadu abuuraan goobo ganacsi oo guuleysta ayaa laga heli karaa tilmaan-bixiyahan oo uu bixiyay Nik Chaykovskiy, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee 12 Semt :
Kordhinta tirada dadka raacsan
Hay'adaha xisaabaadka warbaahineed ee bulshada ayaa ku soo koraya tirada taageerayaasha. Dadku waxay ku kalsoon yihiin xisaabta bogga leh ee leh taageerayaal badan oo ka mid ah kuwa yar. Waa in aad shaqaaleysiisaa xeeladaha suuq-geynta suuq-geynta si aad u soo jiidato raacayaal badan xisaabtaada. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la sii wado si kalsooni leh macaamiisha kala duwan kuwaas oo la yimaada dhinacyo muhiim ah oo ka dhigaya in dhammaan hawlaha suuqgeynta internetka ay guuleystaan. Waxa kale oo aad awood u yeelan kartaa inaad website ka sameysid taageerayaal cusub oo ka socda liiska dhabta ee dhabta ah adoo dhiirigelinaya wadaagista. Waxaa jira aalado badan oo SEO ah oo ka caawiya qof kasta inuu kordhiyo tirada taageerayaasha ee xirfad kasta..
Xidhiidhka dibedda iyo kan gudaha ayaa wanaagsan
Nidaamka warbaahinta bulshada wuxuu abuuraa ilo adag oo dib-u-qaabeyn xooggan. Waxaa jira kiisas badan oo dadka isticmaala ay la yimaadaan xiriirro badan oo soo galaya si ay u sameeyaan website kor u qaada. Backlinks oo ka yimid shabakad warbaahineed ee bulshadu waxay tirineysaa dib u eegis tayo leh. Isticmaalayaashu waxay ka faa'iidaystaan ​​habka dib loo soo celiyo waxay keenaan dad badan oo marti u ah goobahooda. Dib-u-qabadka dibedda waxay la socdaan juice isku xiran, kaas oo u habboon isticmaalka habka ay dadku uga faa'iideysanayaan dhabarka. Waxaa sidoo kale jira habab kale oo loo marayo kuwaas oo xiriiriyeyaashu ay qaadi karaan xiriirka juice kordhinaya awoodda domainkaaga.
Waxaad saameyn ku yeelan kartaa go'aanka taageerayaasha hadda jira si aad ula wadaagto nuxurka. Waa inaad soo dhajisaa nuxurka ku habboon shaqada. Mawduucku wuxuu ka yimaadaa habka ay dadku u fuliyaan suuqyada muhiimka ah ee suuq-geynta. Dadku waxay sidoo kale ku saabsan yihiin fikrado hal abuur ah oo ku saabsan hareerahaaga gaarka ah. Waxa kale oo suurtagal ah in dadku la wadaagaan boostada warbaahinta bulshada iyadoo la sameynayo wada-hadal. Mid ka mid ah habka hal-abuurka ah ee lagu dhagaysto dhagaystayaasha waa iyada oo la qabanayo tartanka. Munaasabadaha, halkaas oo ku guuleystey siddeed baayacmushtarka, wuxuu kordhin karaa waqtiga hawlgalka ee boggaaga internetka.
Maamulayaasha kala duwan waxay leeyihiin habab kala duwan oo dadka ka caawiya inay iibiyaan internetka isbeddeladooda kala duwan. Shirkadaha waaweyn ee guuleysta waxay leeyihiin goobo badan oo eCommerce ah oo qabta dhinacyo kala duwan oo dunida oo dhan ah. Xaaladaha kale, SMM iyo xirfadaha kale ee suuq-geynta internetka waxay ku sameeyaan shabakadaha bogagga soo-galootiga kuwaas oo marka dambe noqda macaamiisha Qaar ka mid ah siyaabaha aad ka dhigi karto olole guul leh SMM sida Twitter ayaa ku jira tusahan. Waxaad awood u yeelan kartaa in aad sameysid oo aad fuliso hal shabakad internet oo suuq-gedisan oo guuleysta iyo sidoo kale isku-dayada kale ee shabakada internetka.